Iwu Nchedo SAFE | Mkpesa Ziri Ezi & Nkwupụta Azụmaahịa Cannabis
Iwu SAFE Banyere
Iwu mkpuchi nchekwa na nchekwa (SAFE) nke 2019
Otu Bill webatara ndị Congress wee kpọọ nke Iwu mkpuchi nchekwa na nchekwa (SAFE) nke 2019 gụnyere nnukwu mgbanwe na iwu wii wii gọọmentị. Iwu SAFE na-eme ndị a:
Ọdụ nchekwa maka solọ Ọrụ Depsository
Ndị na - ahụ maka ego Federal Federal enweghị ike ịkwụzi "azụmaahịa metụtara ahịa cannabis" (CRLB)
enweghị ajọ omume megide ndị ọrụ CRLB
ala na ụlọ metụtara CRLB
Chebe Azụmaahịa Ancillary site na:
Iwu azụmahịa Montiary na-ezighi ezi 18 USC 1957
ego Laundering 18 USC 1956
Nchedo N'okpuru Iwu Federal
Echekwara n'ozuzu n'okpuru iwu gọọmentị ma ọ bụrụ na ndị na-agbaso iwu steeti
Ihe nchedo nke ebighebi maka CLRBs
Achọghị ka ịgbanye CLRBs
Nkọwa na mkpesa arụmọrụ (SAR)
Na-esoro Nduzi FINcen
Nduzi ga-esoro Iwu SAFE
Iwu Nchekwa Nchekwa Nchekwa kwesịrị ikwe ka azụmahịa cannabis na kaadị kredit
N’ebe ahụ - nke ahụ bụ nkọwa dị nkenke & General nke SAFE Act. Ka anyị kwuo ihe ọ pụtara & etu ọ si bụrụ iwu wii wii nke mbụ emere ya na Amụma. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ, n'eziokwu, biko ...
Kpọtụrụ ndị ọka iwu Cannabis
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ego gị nwere ajụjụ gbasara cannabis ichekwa ego na bank, onye ọka iwu cannabis emebere naanị maka ụlọ akụ na ụlọ ọrụ azụmahịa siri ike - ma na-ebipụtakarị ya na mpaghara ụlọ akụ na cannabis - yabụ nye ndị ọka iwu cannabis taa (309) 740-4033 itu ihe banyere SAFE Banking Act.
Chọrọ Talkkwu Banyere Azụmaahịa Cannabis gị?
Ọnọdụ Nchekwa Banye Nchekwa SAFE
Maka oge mbụ n'akụkọ gbasara ị ofụ wii wii, ụgwọ iwu gọọmenti etiti iji gbochie ntaramahụhụ maka ị mariụ wii wii emela ya na kọmitii. Na Iwu nchekwa Iwu nke Iwu 116, gunyere ọnụ ọgụgụ nke ndị nkwado, gụnyere Raja Krishnamoorthi nke Illinois.
SAFE Banking Act na-egbochi ndị na - ahụ maka ụlọ akụ imechi ụlọ ọrụ azụmahịa nwere ike ịkwụsị "azụmahịa metụtara iwu cannabis".
SAFE Banking Act Vote na Congress
N'ihi na SAFE Banking Act mere ya site na kọmitii, ọ na-aga n'ihu n'ihu ịme usoro - usoro nke ọzọ na usoro mmebe iwu. Anyị ga-atụgharị ụzọ ihe asaa dị mkpa na usoro mmebe iwu n'otu oge, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịtụle ederede nke iwu. Nwere onwe gị ịpị njikọ dị n'okpuru - ma ọ bụ pịrịgaa ala maka nyocha anyị.
Ederede Zuru Oke nke SAFE Banking Act Ebe a.
Usoro iwu nwere usoro asaa dị mkpa. Ruo 2019, iwu ịde wii wii ọ bụla emeghị ka ọ gafee nzọ ụkwụ abụọ - usoro kọmitii. Ka anyị tụgharịa ụzọ asaa maka ịme iwu.
Oge Ihe Okike
A na-ewebata Bill ahụ
Billgwọ ahụ na-aga kọmitii
Mbinye aka Onye isi ala
Iwu na-adị irè
Yabụ, a ka nwere ọtụtụ ihe nwere ike ịgahie tupu SAFE Banking Act bụrụ iwu. Nowgwọ ahụ ga-enwerịrị Floor Action, ebe a na-atụ aro ma kwurita maka mmezi iwu ahụ.
Mgbe a ga-eme ntuli aka na ya dabere na mkparịta ụka ụgwọ ahụ ga-enweta, nke ga-emerịrị n'ụzọ Senate na ebe ọ ka nwere ike ịnwụ.
TL; DR Version nke SAFE Banking Act
E nwere ụzọ dị anya iji gaa, mana ọ bụ ụgwọ izizi wii wii kachasị ịga nke ọma - ọ na - eme ka wii wii nke ọma na steeti ndị kwere ya - ma na-enye ohere ịbanye n'ụlọ akụ na azụmaahịa metụtara Cannabis (CRLB)
Gịnị bụ Azụ Ahịa Usoro Echiche Cannabis
Azịza dị mkpirikpi, nke glib bụ ihe SAFE Banking Act kọwara na ọ bụ. N'ụzọ bụ isi, ọ bụ azụmaahịa na-arụ ọrụ na-erubere iwu steeti ya isi. Nchedo n'okpuru Iwu Nchedo SAFE na-agbatị karịa CRLB ma banye na ndị ọrụ ha, na ọbụna ụlọ ala.
Enweghị Nchekwa - Soundda Ka Ego Nweta
Ọdụ Nchekwa Maka Banks
Ndị na-ahazi ụlọ akụ nwebigara ego ike agaghị enwe ike ịkwụsị ego mkpuchi FDIC maka azụmaahịa CRLB. Ndị ọzọ gọọmentị na-ahụ maka nchịkwa enweghị ike inye ụlọ akụ ntaramahụhụ maka inye ọrụ ọ bụghị naanị CRLB, kamakwa ndị ọrụ ha na ụgwọ mgbazinye maka akụrụngwa ma ọ bụ ezigbo ụlọ nke CRLB nwere.
Ihe nchebe maka azụmaahịa Ancillary
Ọbụghị naanị na echekwabara CRLB, kamakwa iwu Iwu Ego na azụmahịa na-emetụta ihe ndị iwu na-akwadoghị (dị ka ire igbo wii wii - usoro ihe omume m nọ n'okpuru CSA).
Nchedo Federal ọzọ maka CRLBs
Cannotlọ akụ enweghị ike “ịnwe ụgwọ ịnwe iwu ma ọ bụ ụkpụrụ Federal ọ bụla” maka ịnye ndị CRLB ego ego, ma ọ bụ itinyekwu ego ha nwetara na ọrụ ndị ụlọ akụ ahụ.
Mana chere - enwere ihe ndị ọzọ!
Iwu ikike ịtụfu ego agaghị emetụta CRLB nke nwere ego na ụlọ akụ na-agụnye nkekọ - nke pụtara na CRLB nwere ike ịnwe ego mgbazinye ego maka ụlọ ma ọ bụ akụrụngwa na-enweghị mgbagha na iwu gọọmentị etiti ịhapụ ịre ahịa na Usoro substanceskpụrụ Ihe agaghị. itinye.
Achọghị ego ụlọ akụ iji nyefee CRLBs
Ndị ụlọ akụ na-achọghị ịgbazinye CRLBs ekwesighi n'okpuru Iwu Nchekwa ego SAFE - mana ndị chọrọ ịme ego nwere ike.
Nkọwa akụkọ gbasara mkpesa na-enyo enyo
Ntuziaka FINcen sitere na nchịkwa Obama maka mkpesa Arụ Ọrụ (SARs) na-enwetaghachi ma wusie ike site na Iwu SAFE Banking. Ntuziaka FINcen sitere na ochichi Obama setịpụrụ amụma maka ọkwa SAR dị iche iche maka ụlọ akụ na-agbazinye CRLBs.
Iwu SAFE nke SAFE na-aga n’ihu site n’ịchọ nduzi FINcen n’ọdịnihu iji rube isi na Iwu SAFE.
Mmechi: oteslọ Nzukọ nke 116 na SAFE Banking Act
Ọ bụghị dị ka okwu dị ka o kwesịrị ịdị, dị ka iwu cannabis America. Mana SAFE Banking Act kacha mma ịjuụ marijuana ga-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ na kọmitii n’akụkọ ihe mere eme nke gọọmentị etiti - nke ga-eme ihe ziri ezi bụ ihe mgbochi dị ala.
Ihe mere n’oge na-adịbeghị anya na SAFE Banking Act
EGO NA-EGO EGO SALE BANKING - April 20, 2020
Anyị edeela tupu gbasara '' SAFE Banking Act '', ugwo iji nyere aka na -eme ka ụlọ ọrụ cannabis na -eme ka ọrụ nweta ego. Ebumnuche bụ isi nke Iwu a bụ ịnye ndị ọrụ nchekwa ego na ụlọ akụ aka iji nweta nchekwa dị oke mkpa iji nye ọrụ azụmaahịa gọọmentị iwu obodo. Laa azụ na Septemba 2019, ụgwọ ahụ gafere oflọ ndị Nnọchiteanya na September gara aga site na votu asato 321-103. Zọ ndị otu Senate na-akwụ ụgwọ, S.1200, nwere ndị ọrụ nkwado iri atọ na ise, ise n'ime ha bụ ndị omebe iwu Republican, gụnyere Cory Gardner nke Colorado, ikekwe onye otu Republican kacha nwee nsogbu maka ntuli aka afọ a. Mkpesa mmechi akwụkwọ Senator Gardner nwere ike rụọ oke ọrụ na nhazi ụlọ omebe iwu maka ndị ọzọ n'afọ. Ọzọkwa, Senator Rand Paul nke Kentucky bụkwa onye na-akwado nkwado na ụgwọ ahụ, nke nwere ike ikwenye ndị isi Onye isi oche na Onye isi Kentuckian, Mitch McConnell.
Ihe enyemaka Covid-19 maka obere azụmaahịa nwere ike ịgụnye Cannabis SAFE Banking
Ọ bụ ihe nwute, ajọ ọrịa COVID-19 na-aga n'ihu emeela kwụsịlata ọrụ mmebe iwu niile na DC yana n'ofe steeti. Gburugburu mbụ nke ihe enyemaka COVID-19, CARES Act, nwere ọtụtụ mmemme ezubere iji nyere obere azụmaahịa na-abụghị obere ọrụ na mba ahụ dum. Ntọala nkuku nke CARES bụ "Mmemme Nchedo Ego", ma ọ bụ PPP. Ọ bụ ezie na mmemme ahụ bụ ego site ugbu a, The Basics nke mmemme a kwụ ọtọ. Nlekọta Obere Azụmaahịa (SBA) na-enye obere ego iji belata ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ. Ọ bụrụhaala na a na-echekwa ndị ọrụ niile ụgwọ ọrụ maka izu asatọ, ma ejiri ego ahụ maka ụgwọ akwụ ụgwọ, ụgwọ ụlọ, ọmụrụ nwa ma ọ bụ arịa, ndị SBA ga-agbaghara mgbazinye ego niile. Ọbụna na steeti dị ka Illinois ebe ekwuputala afọ "dị mkpaAzụmaahịa, azụmahịa cannabis na-agbasi mbọ ike n'oge a na-adọpụ iche ma nwee ike irite oke na mmemme ahụ.
N'ọnọdụ niile, a ga-emejupụta PPP na ụbọchị ndị na-abịa. Mgba ahụ yiri ka ọ ga - abụ PPP ga - enweta ego n'ụzọ kwụ ọtọ site na ụgwọ "ọcha", ma ọ bụ na ọ ga - agafe dị ka akụkụ nke ụdị enyemaka enyemaka dị ukwuu. N'ọnọdụ a ga-atụnye na enweghị ụgwọ “ọcha”, ndị omebe iwu na-ekwularị mmemme ndị ọzọ iji kwado ego dị ka akụkụ nke enyemaka enyemaka COVID-19 dị ukwuu. Ed Perlmutter (D-CO), onye bụbu onye nkwado na SAFE Banking Act, bụ kọrọ na-enwe olile anya inweta otu ụdị nke SAFE Banking Act n'ime ngwugwu enyemaka COVID-19. O siri ike ikwu etu nke a siri dị, mana ụlọ akụ nwere ike ịhụta onwe ha ohere ha nwere ngwa ngwa karịa ka a tụrụ anya.